လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြသခွင့်နဲ့ Koran မီးရှို့ မှု | Zizawa's refuge
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြသခွင့်နဲ့ Koran မီးရှို့ မှု
Posted by zizawa ⋅ 09/09/2010	⋅ 10 Comments
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြသခွင့် right to freedom of expression ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ။ right အခွင့်အရေးကို Hobbes ကဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လဲဆိုတော့ the liberty each man hath, to use his own power, as he will himself.ကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်အင်အားကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် အသုံးပြုနိုင်မှုလို့ ဆိုတယ်။ liberty ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတော့ the absence of external impediments လို့ဆိုတယ်။ ပြင်ပကတားဆီးပိတ်ပင်မှု မရှိတာကို ပြောတာ။ ဒီတော့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ‘ပြင်ပကတားဆီး ပိတ်ပင်မှုမခံရဘဲ ကိုယ့်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်အင်အားကို အသုံးပြုနိုင်မှု’လို့ ဆိုရမယ်။
မျက်တောင် အဖွင့်အပိတ်ထဲက စကားစုကို သေချာဆန်းစစ်ကြည့်ရင် ဒီစကားစုမှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတာ တွေ့ရမယ်။ ပထမတခုဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းအသုံးပြုနိုင်မှု ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်။ ဒုတိယတခုက ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ အဲဒါကတော့ ပြင်ပကတားဆီးပိတ်ပင်မှုမခံရရေး။ ဒါဟာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး၊ သူများက ဖြည့်ဆည်းပေးမှ ဖြစ်နိုင်မှာမို့ သူများနဲ့ဆိုင်တယ်။ ဒါဖြင့်ရင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ဆိုတာ တကယ်တမ်းမှာ ပြင်ပရဲ့တားဆီးပိတ်ပင်မှု မခံရရေးကို တောင်းဆိုတာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုလူများတယောက်က လာမပိတ်ပင်ရေးကို ကိုယ်ကတောင်းဆိုနေတာပေါ့။ တခြားလူတယောက်ကို ကိုယ်က အဲ့သလို တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် ဘာ့ကြောင့်ရှိရတာလဲ။ ဒါဟာ ခု Hobbesတို့၊ Locke တို့၊ Rousseau တိုရဲ့ social contract theory မှာ အရမ်း အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတခုပဲ။
ကျွန်တော့ရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ကို ကျင့်သုံးနိုင်အောင် တခြားလူတွေက သူတို့ရဲ့ အပြုအမူကို သတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။ အဲ့သလို ကိုယ်က သူများရဲ့ အပြုအမူကို သတိထားအောင်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ ကိုယ့်မှာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်၊ နေနိုင်ခွင့် မရှိနိုင်ဘူး။ (တိုက်ခန်းတခန်းကို လူနှစ်ယောက်နဲ့အထက် စုနေတဲ့လူတွေ ဒါကိုသိဖို့ မခက်ဖူး။) ဒီတော့ ကိုယ်က သူများကို ဟိုလိုမလုပ်နဲ့၊ ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဆိုပြီး တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်က ဘယ်ကရမလဲ။ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ သူများကပေးမှရမှာပေါ့။ ကိုယ့်လိုပဲ သူများတွေမှာလည်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြသခွင့် ရှိဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်အမူအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စောင့်ထိန်းဖို့ သူများတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့။ ဒီတော့ လူတိုင်းလူတိုင်း လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဟာ လူတိုင်းလူတိုင်းက ကိုယ့်အမူအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စောင့်ထိန်းပါ့မယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်ခံမှု၊ ၀တ္တရားမရှိဘဲ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တနည်းအားဖြင့် အခွင့်အရေးတိုင်းဟာ right တာဝန်သိမှုobligation နဲ့ ခွဲလို့မရအောင် ဒွန်တွဲနေတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ်အပါအ၀င် လူတိုင်းက တခြားလူရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြသမှုကို လေးလေးစားစားသဘောထားရမဲ့ တာဝန်ရှိတယ်။ ဒါဟာ ပြောခဲ့တဲ့ social contract theory ရဲ့ အခြေခံပဲ။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အခွင့်အရေး တစုံတရာရှိဖို့ရာ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ သူမှအပ တခြားလူတွေကိုလည်း တစုံတရာ တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိရမယ်။
ဒီတော့ အမေရိကန်က မွတ်စလင်တွေ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ဆိုတာကို ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ တခြားအမေရိကန်တွေက သူတို့ပြုမူပုံကို စောင့်ထိန်းရမဲ့ တာဝန်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတခုမှာ အစ္စလာမ်ကျမ်းစာအုပ်တွေကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးတာကို တားဆီးတာဟာ အမေရိကန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ မညီဘူးတဲ့။ ဒါတဦးချင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်တဲ့။ မီးရှို့ တဲ့လူက ရှို့ ခွင့်ရှိပြီး မွတ်စလင်တွေကတော့ မီးမရှို့ ဖို့ တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် မရှိဘူးပေါ့။ ဒီလို တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးဟာ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ။ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ ရေရှည်တည်တံ့ဖို့ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်ခံသင့်ခံပြီး စောင့်ထိန်းရတယ်။ ခုသိရသလောက်တော့ ဒီလုပ်ရပ်ကို အမေရိကန် အများစုကြီးက မထောက်ခံဘူးလို့ သိရတယ်။ ဒါဟာ အားတက်စရာပါ။ အဲ့သလို မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာ ကြိုးပမ်းရယူခဲ့ရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေဟာ အမေရိကန်မှာ ပျက်သုဉ်းတော့မှာ မလွဲမသွေဘဲ။
« Book Review 3
Post-modernist တွေပြောတဲ့ Subjective reality ဆိုတာ ချေးထုတ် အတွေးအခေါ် »
10 thoughts on “လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြသခွင့်နဲ့ Koran မီးရှို့ မှု”
“တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်က ဘယ်ကရမလဲ။ … သူများကပေးမှရမှာပေါ့။”
ကြိုက်တယ်ဆရာသမား၊ အဲဒီအချက်ကို သိသလိုလိုနဲ့ကတော့ကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် ဖတ်မိတာတွေက အခြေခံသီအိုရီအပိုင်းမရောက်တော့ ဟာနေသလိုဖြစ်နေတာ အခုမှနည်းနည်းနေသာထိုင်သာ ရှိသွားတယ်။ ဒီကနေပြီး အများကြီးချဲ့တွေးလို့ ရသွားပြီ။
မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ ကျနော်တို့လိုလူတွေမှာ ဒီလိုအတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ သိဖို့အသာထား ကြားတောင်မကြားဖူးကြတော့ ဘာသာရေးအဆိုအဆုံးအမတွေနဲ့ပဲ အစားထိုးနေကြရတာကိုး။ ဒီတော့ အတ္တ၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လက်နက်တွေကို လူတွေမှာတွဲပေးလိုက်တော့ အာဏာတစ်ခုဖြစ်တည်လာ၊ ယစ်မူးမှုသဘာဝနဲ့ပေါင်းပြီး ဆန့်ကျင်ဖက်လို့ထင်မိသမျှကို (မိစ္ဆာ) ဒိဋ္ဌိလို့ လက်ညိုးထိုး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဘုံဘဝတည်၊ ကိုယ့်ရောင်ပြန် (မှန်) မကြည့်မမြင်နိုင်ကြတော့လို့ (မြန်မာပြည်အပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ) လက်ရှိအနေအထားဆီဦးတည်ခဲ့ရတယ်လို့ သုံးသပ်ရမလားပဲ။ သူတစ်ပါးမပေးပဲ ခွန်အားသုံးပြီး ကြောက်စိတ်အပါအဝင် သူတစ်ပါးရဲ့အခြားအားနည်းချက်တွေကို အခွင့်ကောင်းယူ၊ အသုံးချနေကြတယ်လို့လည်း ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။
လိုတာနဲ့ ထင်တာလေးတွေ ထပ်ဖြည့်ပါအုံးဗျ။
Posted by မန်းကိုကို | 09/09/2010, 03:19 Reply to this comment	These are all second-hand ideas, Ko Mahn Ko. Nothing original..
Posted by zizawa | 09/09/2010, 08:16 Reply to this comment	ဟုတ်ပါတယ်ဆရာရယ်၊ မူရင်းဆိုရင်တော့ ခုလောက်ဆိုဆရာလည်း ဘလော့တောင်မရေးနိုင်ပဲ လက်ချာ၊ ကွန်ဖရင့်၊ စင်မီနာတွေနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလည်ပြီး ခြေကြွခကို ယူရိုပြေးဝယ်ရတာနဲ့ ရွှေချောင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းရတာနဲ့ ဒီကပုရွက်ဆိတ်ကိုကို တို့ကို လှည့်ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 🙂
ကျနော်ဆိုလိုတာက ဒီအတွေးအခေါ်တွေကို လူတိုင်း access မရှိတာ၊ ရှိရင်လည်း စိတ်မဝင်စားတာ၊ နားမလည်တာစတဲ့အပိုင်းတွေကိုပါ။ ညွှန်းထားတဲ့ ဘီဘီစီအစီအစဉ်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ရှိလို့ တဖြည်းဖြည်းနားထောင်ယူရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သိသူဖေါ်စားဆိုတာလည်း သွားသတိရမိတယ်။ (ကျနော်တို့လို) အင်တာနက်ပေါ်တက်နိုင်သူတိုင်း လိုချင်တာ၊ သိချင်တာတွေကို ရှာတတ်၊ ရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်မထွက်ပါဘူးဗျာ။ networking ဟာအရေးပါပါတယ်။
ပြီးရင် အောက်မှာတစ်ယောက်ပြောထားသလို ဆရာ့ပို့စ်တွေက ထွက်မယ့်ထွက်လာတော့လည်း တော်တော်စိတ်တာပဲဗျ။ ကွန်မန့်လာပေးမလို့က အီးမေးထဲတင်ဖတ်ပြီးခေါင်းမူးနေတုံး အသစ်ထပ်ဝင်လာတော့ အားလုံးပျောက်သွားပြီး ဘလော့ထဲတောင်ဆက်မလာဖြစ်တော့ဘူး။ အရင်ဆရာပြောသလိုပဲ ကိုယ့်နဲ့အသိအမြင်တူသူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ပြဿနာက မြန်မာပြည်သားတွေထဲမှာ ဆရာနဲ့တွဲနိုင်ဖို့ကလည်း နည်းသကိုး။
ဒါနဲ့ ကိုရန်ကျမ်းမီးရှိူ့မယ့်ကိစ္စက cnn မှာလား time မှာလား grievance politics လို့ရှင်းပြထားတော့လည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်ပါပဲ။
Posted by မန်းကိုကို | 19/09/2010, 05:53 If you readers are interested in the ideas on society and politics, pls check out http://www.bbc.co.uk/radio4. Select the programme called ‘In Our Time’ by Melvyn Bragg. All of R4 programmes are brilliant. And the good thing is you can listen round the clock. If you miss the programme you like, then you can come back and listen with BBC i-player.
Posted by watote | 09/09/2010, 09:03 Reply to this comment	The plan to burn Koran has beenabig news!
Suchaleading country of democracy champion has such people who tend to offend others’ religious faith in such silly ways.
Needless to say how it would be in the emerging so-called democratic Myanmar under discipline flourished guided democracy, which is in fact merely an interest protective tyranny.
Why we tend to punish all dogs in retaliation againstarabies infected dog?
Posted by Nanda | 09/09/2010, 17:21 Reply to this comment	မြန်မာလိုလေး ပြန်ရှင်းထားတာ ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းတင်ပါ။ ပို့စ်တွေ သိပ်စိတ်တော့ လိုက်ဖတ်ရတာ မောနေပြီ။🙂
သီအိုရီတွေကို classical, modern ကနေ တဖြည်းဖြည်း ဒီဘက်ခေတ် ရောက်တဲ့အထိ ဆက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by pandora | 10/09/2010, 09:11 Reply to this comment	ကျွန်တော်လည်း စမိတဲ့ အလုပ်တခုကို ပီးအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ။ ဖတ်တဲ့လူရှိတာသိရတာကတော့ အားရှိတာပေါ့။😀
Posted by zizawa | 10/09/2010, 19:31 Reply to this comment	မပန်တို့လို အချိန်ရှားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ပို့စ်တွေ စိပ်တယ်လို့ ထင်မှာ။ ကျမတို့လို အချိန်ပိုလို့ တနေ့ ၂နာရီ ၃နာရီ ဖတ်နေတဲ့သူတွေကျတော့ တော်တော်ကြီး စောင့်ရပါလားလို့ ထင်တာ…။ အချိန်ဆိုတာလဲ relative object ပဲနော် ……
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာရေး ကျမ်းစာတွေ မီးမရှို့ဖြစ်တော့တဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်….. ဘာတဲ့ – အမှားတခုကို နောက်ထပ်အမှားတခုနဲ့ ချေဖျက်လို့ မရဘူး ဆိုလား။
Posted by မိုးစက်ပွင့် | 11/09/2010, 11:30 Reply to this comment	ပို့စ်အများကြီးကို တထိုင်တည်းဖတ်သွားပါတယ်၊ နက်နက်နဲနဲ ရေးထားတာတွေကိုတော့ မမှီပါဘူး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗဟုသုတရပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါဇီဇဝါ။
Posted by TZA | 19/09/2010, 10:56 Reply to this comment	တလောကပဲ ဗမာပြည်မှာ မိုးပြာဂိုဏ်းကို မတရားအသင်းအဖြစ်ကြေညာတယ်။ အဲ့ဒီ ကိုယ်တော်ကိုလည်း ဖမ်းပြီးထောင်ချထားတယ်ကြားတယ်။ ပညာတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ ဘယ်သူမှ ကန့်ကွယ်တာမကြားမိဘူး။ အလယ်ခေတ် အတွေးအခေါ်ကနေ မတိုးတက်သေးတာ စိတ်ပျက်စရာပဲ။
Posted by Arkar Kyaw | 12/12/2011, 14:52 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...